Yaadannoo iccitii shamarran Chibook 9 fi 10 - BBC News Afaan Oromoo
Yaadannoo iccitii shamarran Chibook 9 fi 10
Madda suuraa, AFP/Boko Haram
Dubartoonnii fi haadholiin warraa milishoota Booko Haraamin erga qabamani booda gadhiifaman hawaasichi waan qollifateef fuulli isaanii akka dhokatu ta'e
9) Akkaataa viidiyoon itti waraabame
''Shamarran 10 ta'an muka Tamarind jalatti qabani viidiyoo isaan waraaban. Tokko tokkon maqaa isaanii waamani, maqaa warra isaaniis gaafatani. osoo waraabani achii 'Isin midhneerraa?' jennaan, 'Lakki,' jenne.
Waan nurratti hojjetamaa jiru maatii kenyaafi mootummaaf akka dubbannu nutti himan. Mootummaa fi maatiin keenya akka nu gudeedaa fi nu jeeqaa jiran dubbatu.
'Kanaafuu, nu keessaa tokko waamani gaafatan, 'Erga isin bunne bakka kana isin fidne sin gudeedne ykn isin waliin ciisnee beeknaa?' Isheenis 'Lakki' jette. Ammas gaafate…'Waan isinii goonee fi isin kunuunsaa jiraachuu keenya mootummaa fi maatii keessanitti akka dubbattan barbaanna.'''
10) Milishoonni oduu sirriitti hordofu
Yeroo tokko tokko hidhattoonni erga oduu dhaggeeffatani booda viidiyoowwan waraabamu.
''Takka turani oduu BBC Haawusaa dhaggeeffatan. Achii tokko tokkon nu waaman. Gar tokkon kenya akka dhaabannu, kaan akka jilbeeffannu, gariin akka teenyu(osoo waraabani) nutti himani teenye. ]Ergasii 'Barreeffama Islaamaa]' dubbisne. ''
Barreessitoonni maal ta'an?
Naa'omii Adaamu fi kaan sadii waan isaan mudate barreessan - Rodaa Pitar, Saraatu Ayubaa fi Margaaret Yaamaa - ji'a Caamsaatti gad-lakkifaman.
Mootummaan Yunvarsiitii Ameerikaa Kaaba-bahaa Naayijeeriyaa magaalaa Yoolaa argamutti baatii Fulbaanaa dhaqani akka baratan erge.
Maatii ijoollee torba qabu keessaa lammaaffaa kan dhalatte Adaamun waan barreessite maatii isheef ol kaa'uu ishee dubbatte.
''Akka hin daganneefin barreesse,'' jetti.
''Obbolaankoo dhiiraa, dubaraa, maatiin koos akka ilaalaniifan barreesse.''
Harmeen Adaamu adde Koloo dubbisuu hin danda'an garuu waan barreefame quba qabu
Hiriyaan ishee Saraah Saamu'el garuu hamma yoonaa hin deebine. Kuni isaan gaddisiisa.
''Baay'een gadde. Baay'ee. Waa'ee isheen yaada.''
Turtii isaanii waggaa lamaa keessatti yeroo lolli isaanitti ka'e waan looltonnii Bokoo Haraam nyaatani jiraatan jalaa waan citeef isa dandamachuuf heerumte.
Heerumuun ishee abbaa warraa ishee loltuu Bokoo Haraam waliin kaampiiti bahani bakka nyaata gaha argatanitti jireenya gaarii akka jiraattu yaaddee turte. Haa ta'u malee, dubartoonni heeruman tokkon isaaniiyyuu hin gadhiifamne.
Abbaan ishee Saamu'el Yaagaa intalli isaanii osoo qabamte jirtu barreessuun ishee hammana isaan hin ajaa'ibne.
''Yeroo hunda barreessiti. Takka takka osoo dubbistuu rafti,'' jedhan.
Xumura baruullee yaadannoo ishee irratti maqaa obboloota ishee shan tarreessite: ''Maqaan abbaakoo Saamu'el maqaan harmeekoo immoo Ribiqaa dha.''
Akka dagachuu hin barbaanneetti jechuudha.
Yaadannoo iccitii Chibook kutaawwan 6, 7 fi 8ffaa
Barreeffama kutaa kutaan isiniif dhiyeessinuun, yaadannoo shamarran Chibook, wayita boojuu milishoota Bookoo Haraam jala turan barreessan isiniif dhiyeessaa turre kutaaleen 6, 7 fi 8ffaa kunoo.
UN baqattoota Eertiraaf Naannoo Amaaraa Dabaarqitti kaampii ijaaruuf
Waa'ee magaala Benishaangul hidhattoonni to'atan jedhamte hanga ammaa maal beekna?
Misaa'eliin Sooriyaan dhukaafte dhiheenya buufata nuukilara Israa'el rukute
Dureen Chaad haaraa - Maahaamat Idris Debii eenyu?